Magacaabista Sammaale ma hiilbaa mise waa hagardaamo? | Berberanews.com
Home WARARKA Magacaabista Sammaale ma hiilbaa mise waa hagardaamo?
Magacaabista Sammaale ma hiilbaa mise waa hagardaamo?
Cabdi Xaamud Caydiid
Hargeysa-(Berberanews)- Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Silaanyo, ayaa isku-shaandhayntii ugu ballaadhnayd intii xukuummadiisa laba jirtay talada haysay. taasoo ay xilalkoodii ku waayeen wasiiro, ku-sigeenno iyo masuliyiin, halka kuwo kalena loo bedelay wasaarado kale.
Tallaabada Madaxweyne Silaanyo qaaday waxa ka dhashay dareenno iyo aragtiyo bulshadu ka bixisay go’aankan oo falanqaynta ugu badan ee goobaha bulshadu ku kulanto waxa ugu hadal-hayn badan xil-ka-qaadista Wasiirkii Maaliyadda Eng. Maxamed Xaashi Cilmi oo ah aqoonyahan ku xeeldheer dhaqaalaha iyo Masuulka xilkiisa loo magacaabay Md. Cabdicasiis Maxamed Sammaale, oo ah Guddoomiye-ku-xigeenka koowaad ee Golaha Wakiillada Somaliland.
Wasiirka cusub ee Madaxweyne Silaanyo u magacaabay Wasaradda Maaliyadda Cabdicasiis Maxamed Sammaale oo ka mid ahxubnaha ugu miisaanka culus xisbiga KULMIYE, uguna cadcadaa wakhtigii ololaha doorashada, waxa uu hore I sheegay inuu isu soo taagi doono murashaxa madaxtinimmo ee xisbiga KULMIYE shanta sano ee soo socota, waxaanay dadka siyaasadda odorosaa ku tilmaameen hadalka Sammaale mid khatar ku ah murashaxnimmada Muuse Biixi Cabdi.
Hadaba, markii uu soo baxay go’aankan waxa dooda dadweynuhu isweydiinayaan ujeedad Madaxweyne Silaanyo ee magacaabista Cabdicasiis Sammaale ma mid uu ku kala reebayo isaga iyo Muuse Biixi baa mise waxa jira heshiisyo qarsoodiya oo Sammaale kaga tanaasulay hankiisii siyaasadeed?
Madaxweyne Silaanyo oo muddo dheer sida jiirka iyo bisada u kala ilaalinayay Muuse iyo Sammaale oo hirdan siyaasadede dhexmitanayay, ayaa tallaabada uu maanta qaaday u muuqataa hiil siyaasadeed oo uu ku kala reebay, una hiiliyay Muuse Biixi Cabi oo isagu caqabad hortaagan u arkayay Sammaale, una dabaal dagaya magacabista Cabdicasiis Sammale ee wasiirka Maaliyada oo ku ahayd laf dhuun gashay cabsina uu kaqabay inuu isla soo sharaxo dorashada madaxtooyada xiliga uu baneeyo booska masaxwayne Silaanyo.
Waxa iyana soo baxay doodo ay dadka qaarkood qabaan oo ah inaanu Cabdicasiis Sammaale yeeli doonin magacaabista Wasiirka Maaliyadda oo uu ka hanweynyahay, kana midho dhalin doono hankiisa siyaasadeed ee madaxweynenimmo.
Waxaynu sugnaaba waa go’aanka Sammaale ee magacaabista xilkan oo haddii uu yeelo dhab ka dhigi doonta dooda odhanaysa inuu ka hadhay hankii kaga jiray tartanka murashaxnimmada Xisbiga KULMIYIYE, haddii uu diidana rumaynaysa hamigii ku jiray.
Waxaan ku soo ururinayaa magacaabista Madaxweyne Silaanyo ee Cabdicasiis Sammaale ma hiilbaa mise waa hagardaamo?
Previous articleDeadly blast hits Somali president’s compound
Next articleMadaxweyne Obama oo aqalka cad ku qaabilay Raysal-wasaaraha Ingiriiska iyo nuxurka wadahadalka labada dhinac.Akriso oo daawo